Dhalinyaro Soomaali ah oo Maanta ay Maxkamadi Xukuno ku riday India. – Hornafrik Media Network
Dhalinyaro Soomaali ah oo Maanta ay Maxkamadi Xukuno ku riday India.
By HornAfrik	 On Aug 8, 2017
Maxkamad ku Taala Magaaladda Mumbai ee Dalka Hindiya ayaa Xukun isgu jira Xabsi iyo Ganaax lacageed ku riday dhalinyaro Somaaliyeed oo lagu eedeeyay Burcad Badeed nimo kuwaas oo Muddo ku xiranaa Dalkaasi.
Qaadigii Maxkmadda ayaa sheegay in xukunka dhalinyaraan uu yimid kadib markii Xeer ilaalinta Dalkaasi ay kusoo eedeeysay isku day Dil, Afduub iyo xadgudubyo kale.
Maxkamaddu waxaa ay sidoo kale dhalinyaradaan ku soo Rogtay Ganaax gaaraya 14,ooo oo Rubiis Midkiiba, xilli doowladda hinyada ay Qorsheeyneeyso in dhalinyaradaasi ay kusoo Warejiso Gacanta Dowladda Soomaliya .
Markab ay leeyihiin ciidamadda hindiya ayaa Sanadkii 2011 kii Dhalinyaro ay kamid yihiin kuwa laxukumay waxaa uu ka Qafaashay Xeebaha Soomaaliya, waxaa dhalinyaradaasi la geeyay Wadanka Hindiya oo Muddo Badan ay ku xirnaayeen.
Tirada dhalinyaddu waxaa ay ahayd 120 Ruux markii ay Ciidamadda Hindiya Qabteen 2011 kii, Labo kamid ah ayaa dhintay intii ay Xabiga ku jireen.
Labadii Bishaan ayaa sidaan oo kale Waxaa Maxkamad ku taala Mumbai ay xun ku riday 15 Dhalinyaro ah. Xukunkooda waxa Goob jog ka ahaa masuuliyiin ka Tirsan wasaradda Arrimaha dibadda Soomaliya iyo Xafiiska Xeer ilaalinta Soomaaliya.
Wadarta Dhalinyaradda Soomaaliyed ee xukunku ku dhacay waa 31 Ruux, waxaa dhiman oo wali xukun sugeyaal ah 87 kale.
Sida uu dhigayo Hishiiskii ay kala Sixiixdeed Somaliya iyo Hindiya waxaa la filayaa in dhalinyaradaan lagu soo wareejiyo Gacanta Doowladda Soomaaliya marka la maxkamdeeyo 87 Xukun sugayaal ah.
Faah faahin ku saabsan dab Xalay ka kacay Suuqa Bakaaraha.
Baarlamaanka Somaliland oo Maanta Gacanta iskula tagay. iyo Rasaas laga maqlayo Xaruntooda.